लकडाउन खुलेपछि संक्रमित बढे : स्वास्थ्य मन्त्रालय
आयोमेल संवाददाता काठमाडौं - शनिबार, साउन १७, २०७७
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लकडाउन खुल्ला भएपछि कोरोना संक्रमणदर बढेको जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयको नियमित कोरोना अपडेटका क्रममा प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले लकडाउन अवधि र लकडाउनपछिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै संक्रमणदर बढ्दै गएको बताएका हुन्।
लकडाउन खोल्नु अघि ११ दिनको ४७ हजार ८ सय ७७ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो। जसमा १ हजार ३ सय ४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जुन परीक्षण गरिएकोमा संक्रमण दर २.८ प्रतिशत भएको डा. गौतमले जानकारी दिए।
त्यसैगरी लकडाउन खुलेको ११ दिनपछि (७–१७) गतेसम्म ५८ हजार १ सय ७४ पिसिआर परीक्षणमा २ हजार ९२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। ‘जुन संक्रमण दर ३.६ प्रतिशत हो', डा. गौमतमले भने, 'लकडाउन खुलुको गरेपछि ०.८ प्रतिशतले संक्रमण बढेको छ।’
शनिबार देशभर ३ सय १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै नेपालमा कूल संक्रमित संख्या २० हजार ८६ पुगेको छ।
पछिल्लो २४ घन्टामा ६ हजार ३ सय ९३ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।